China Galvanezed Seamless Steel Pipe orinasa sy mpamatsy | XUANZE
Ny fantsom-by vy tsy misy galvanisika dia milentika mafana, noho izany ny habetsaky ny plastika zinc dia avo dia avo, ny hatevin'ny savony zinc dia mihoatra ny 65 microns, ary ny fanoherana ny harafesiny dia hafa noho ny an'ny fantsom-boaloboka mafana. Ny mpanamboatra fantsona fantsona mahazatra dia afaka mampiasa fantson-drivotra mangatsiaka toy ny fantson-drano sy gazy. Ny firakotra zinc an'ny fantsom-boaloboka mangatsiaka mangatsiaka dia sosona elektroplated, ary ny sosona zinc dia misaraka amin'ny fantsom-by vy. Ny sosona zinc dia manify ary mora potraka satria miraikitra amin'ny vongan-fantsona vy. Noho izany, ratsy ny fanoherana ny harafesiny. Fady ny mampiasa fantsom-by vy mandrisika toy ny fantson-drano vy amin'ny trano fonenana vaovao.
Ny fantsom-by vita amin'ny vy dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana, ny milina, ny fitrandrahana arintany, ny indostrian'ny simika, ny herinaratra, ny fiaran'ny lalamby, ny indostrian'ny fiara, ny arabe, ny tetezana, ny fitoeran-javatra, ny fotodrafitrasa, ny milina fambolena, ny milina solika, ny milina mitady ary ny indostrian'ny famokarana hafa.
Fantsom-by vy mandroboka mafana: ny fantsom-boaloboka voafafa mafana dia ny fiovan'ny metaly metaly amin'ny vy vy hamokarana sosona firaka, mba hampifangaroana ny matrix sy ny coating. Mba hanesorana ny oksida vy eo ambonin'ny fantsom-by, aorian'ny pickling, diovin'ny amonium chloride na zinc chloride aqueous solution na tanke misy vahaolana mifangaro amin'ny ammonium chloride sy zinc chloride, ary avy eo nalefa tany amin'ny tanke galvanizing. Ny fantson-drano mafana dia manana tombony amin'ny fanamainana fanamiana, firaiketam-po mahery ary fiainana maharitra. Ny fiatraikany ara-batana sy simika sarotra eo anelanelan'ny substrate an'ny fantsom-boaloboka mafana-mafana sy ny fandroana anidina dia mitarika ny famolavolana sosona ferroalloy zinc miaraka amina firafitry ny fanoherana ny harafesina. Ny sosona firaka dia ampifandraisina amin'ny sosona zinc madio sy ny matroka fantsom-by, noho izany dia matanjaka ny fanoherana azy.
Fantsom-by vy mangatsiaka mangatsiaka: ny fantson-drivotra mangatsiaka dia elektro vita amin'ny herinaratra, ny habetsaky ny plastika zinc dia 10-50g / m2 fotsiny, ary ny fanoherana ny harafesiny dia tsy mitovy amin'ny an'ny fantsom-boaloboka mafana. Mba hiantohana ny kalitao, ny ankamaroan'ny mpanamboatra fantsona fantsona mahazatra dia tsy mampiasa galvanizing electro (plating mangatsiaka). Ireo fitaovana kely, taloha an'ny orinasa kely hampiasa galvanizing, mazava ho azy, dia mora vidy ihany. Ny Minisiteran'ny fananganana dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanafoanana ireo fantsona nandrisika mangatsiaka mihemotra, ary tsy avela mampiasa fantson-drivotra mangatsiaka toy ny fantsona rano sy gazy. Ny firakotra zinc an'ny fantsom-boaloboka mangatsiaka mangatsiaka dia sosona elektroplated, ary ny sosona zinc dia misaraka amin'ny fantsom-by vy. Ny sosona zinc dia manify ary mora potraka satria miraikitra amin'ny vongan-fantsona vy. Noho izany, ratsy ny fanoherana ny harafesiny. Tsy azo atao ny mampiasa fantsom-by vy mangatsiaka mangatsiaka ho toy ny fantson-drano amin'ny trano fonenana vaovao.
PIPE STEEL GARVANIZED
Esory ny oksida vy eo ambonin'ny faritra vy
Zinc chloride + Amonium klôroida
Sasao ao anaty fitoeran-drano misy rano mifangaro.
Fanoherana ny harafoana matanjaka.
Ny fanaronana dia fanamiana.
Savaivony ivelany 13-508mm
Ny hatevin'ny rindrina 2.5-30mm
halavan'ny 6m & 12m
Fifanarahana tariby Spiral
Famatsiana tariby spiraly
Previous: API 5LGr.B Pipe-tsipika mainty
Manaraka: Sodina vy vita amin'ny rindrina mavesatra